Chii chinonzi Augmented Reality? Teh Nhoroondo uye Chaiye-Nyika Mienzaniso yeAAR
Chii chinonzi Augmented Reality? AR Iri Kuendeswa Sei Kumakambani?
Svondo, June 3, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Kubva pamaonero emushambadzi, ini ndinotenda chaizvo kuti chakawedzerwa chokwadi chine mikana yakawanda kupfuura yechokwadi chaicho. Nepo chokwadi chaicho chichatibvumidza kusangana neruzivo rwechigadzirwa, chokwadi chakawedzerwa chinowedzera nekusangana nenyika yatiri kugara mairi. AR inogona kukanganisa kushambadzira, asi ini handitende isu takatsanangura zvizere chakawedzera chokwadi uye takapa mienzaniso.
Kiyi kune iyo inogona nekushambadzira kufambira mberi kwetekinoroji tekinoroji. Iine bandwidth yakawanda, komputa kumhanya iyo yakakwikwidza desktops makore mashoma apfuura, uye yakawanda yekurangarira - smartphone zvishandiso zviri kuvhura mikova yekuwedzera kwechokwadi kutorwa nekusimudzira. Muchokwadi, panopera 2017, 30% yevashandisi veApplephone vakashandisa chirongwa cheAR… vanopfuura mamirioni makumi matanhatu vashandisi muUS chete
Chii chinonzi Augmented Reality?
AR iri Kuendeswa Sei Kwekutengesa uye Kushambadzira?
Sekureva kwemushumo uchangobva kuitwa naElmwood, matekinoroji ekufananidza akaita seVR neAR akagadzirirwa kupa kukosha kwazvino kunyanya kune vekutengesa nevatengi zvigadzirwa munzvimbo mbiri dzakakosha. Chekutanga, ivo vanowedzera kukosha kwadzinosimudzira ruzivo rwevatengi rwechigadzirwa chacho. Semuenzaniso, nekugadzira yakaoma ruzivo rwechigadzirwa uye zvimwe zvakakosha zvemukati zvinowedzera kubatanidzwa kuburikidza nekumisikidza, kupa nhanho-nhanho kudzidzisa, kana kupa hunhu hunhu, senge inyaya yekuomerera kwemishonga.
Kechipiri, aya matekinoroji anotora uko kwaanogona kubatsira mabhenji kuzivisa uye nekushandura nzira iyo vanhu vanoona iyo mhando nekugadzira zvakapfuma, zviitiko zvekudyidzana uye nhoroondo dzinogombedzera vasati vatenga. Izvi zvinogona kusanganisira kugadzira kurongedza chiteshi nyowani chekubatana, kuvhara musiyano uripakati pekutenga nepamhepo, uye kuunza kushambadzira kwechinyakare kuhupenyu nenhau dzine hunyanzvi.
Mienzaniso yeAugmented Reality Maitiro Ekutengesa uye Kushambadzira
Mumwe mutungamiri IKEA. IKEA ine yekutenga app iyo inokutendera iwe kufamba nyore nyaya yavo uye uwane zvigadzirwa zvawakaona iwe uchitsvaga kumba. With IKEA Nzvimbo yeIOS kana Android, yavo app inobvumidza vashandisi vangango "isa" IKEA zvigadzirwa munzvimbo yako.
Amazon yakatevera muenzaniso ne AR maonero ye iOS.
Mumwe muenzaniso pamusika ndeye Yelp chimiro mune yavo Mobile Anwendung anonzi Monocle. Kana iwe ukakanda iyo app uye ukavhura iyo yakawanda menyu, iwe unowana imwe sarudzo inonzi Monocle. Vhura Monocle uye Yelp zvinoshandisa nzvimbo yako, nzvimbo yefoni yako, uye kamera yako kufukidza data ravo zvichionekwa kuburikidza nekamera kuona. Chaizvoizvo inotonhorera - ndinoshamisika kuti havataure nezvazvo kazhinji.
AMC Theatre inopa nharembozha application izvo zvinokutendera kuti unongedze pane posita uye tarisa kuona kwemuvhi.
Modiface yakatanga magirazi ekupindirana ezvitoro zvinotengeswa nemushandisi kuti atarise sei nemakeap, vhudzi, kana zvigadzirwa zveganda zvakaiswa. Sephora yakaburitsa tekinoroji yavo kuburikidza nesoftware application.
Makambani anokwanisa kushandisa avo augmented real application vachishandisa ARKit yeApple, ARCore yeGoogle, kana Hololens yeMicrosoft. Makambani ekutengesa anogona zvakare kutora mukana we Kuwedzera kwe SDK.
Kuwedzera Kwechokwadi: Kare, Nhasi, uye Ramangwana
Heano muongororo wakanaka mune infographic, Chii chinonzi Augmented Reality, yakagadzirwa na Vexels.
Tags: armusikaAugmented realityyakawedzera chokwadi tsananguroramangwana kana arnhoroondo ye arikea kataroguikea katarogumavhenekerichii archii chiri chakawedzera chokwadiyelp nharembozhayelp monocle
Iwo mana Mabhenefiti eMicro-Influencers